‘ईडीभी’ खुल्दै, कसरी भर्ने ? हेर्नुहोस भिडियो सहित – Kavrepati
Home / प्रमुख समाचार / ‘ईडीभी’ खुल्दै, कसरी भर्ने ? हेर्नुहोस भिडियो सहित
‘ईडीभी’ खुल्दै, कसरी भर्ने ? हेर्नुहोस भिडियो सहित
admin3weeks ago	प्रमुख समाचार Leaveacomment 40 Views
काठमाडौँ- अमेरिकाले सन् २०२३ का लागि आजदेखि ईडिभी चिट्ठा खुला गर्ने भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाली समयअनुसार बुधबार बेलुका ९:४५ देखि डिभी चिट्ठा खुला गर्ने भएको हो ।
डिभी २०२३ का विजेताहरूले सन् २०२३ को सेप्टेम्बर ३० सम्म भिसा प्राप्त गर्नसक्ने छन् भने नतिजा सन् २०२२ को मे महिनामा आउनेछ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले डिभीबारे फेसबुकमा यस्तो लेखेको छ-
छनौट भई अन्तरवार्ता सफल भएमा आवेदकको अमेरिका यात्राका लागि बाटो खुला हुन्छ । त्यसपछि तपाईलाई आप्रवासन भिसा दिइन्छ । यद्यपि अन्तरवार्तामा सफल भएका सबैले भिसा पाउँछन् भन्ने पनि हुन्न । तर, भिसा पाएपछि भने अमेरिका यात्राको बाटो खुला हुन्छ । भिडियो
Previous पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, असोज २१ गते बिहीबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Next मामा र भाञ्जीलाई एउटै ओ’छ्यानमा भेट्दा माइजू भाञ्जीको हा’नाहा’न(भिडियो हेर्नुहोस्)